Creative Writing » Professionalism	41
View all posts by Zaw Thant →	Blog
ခင်ဇော် says: စစ်သား စစ်တိုက်ရင်းသေတာ ငိုပြတတ်ရမယ်။
Mr. MarGa says: ရှင်းနေရင် ပြန်ရှုပ်
Zaw Thant says: .. ဖောရိမ်းမှာ အလုပ်လုပ်နေသူများလည်း ဗမာအစားအသောက်လွမ်းသလေး ဘာလေးမညည်းနဲ့နော်..
ခင်ဇော် says: သူ့ ကို ပဲ ပလာတာလေး သယ်ခိုင်းမိပါတယ်။
Mr. MarGa says: Professional ဖြစ်ဖို့ ချက်ချင်းလက်ငင်း လုပ်ယူလို့မရ
Zaw Thant says: .. Professional ဖြစ်အောင် train ဖို့က ဘက်ဂျက်ကလိုသေးတယ်.. ဆိုတော့ ရဲသားများအတွက် နိုင်ငံတော် ဘက်ဂျက် ၂၀% သုံးဖို့ အချက် အခုချိန် တောင်းဆိုရအောင်ဗျာ.. Mr. MarGa ကလမ်းပေါ်ထွက်တောင်းဆို ကျွန်တော်က နောက်ကွယ်က ဝန်းရံပါမယ်.. :D
ခင်ဇော် says: တွေ့လား တွေ့လားး..!!!
Mr. MarGa says: သေချာတယ်ဗျ
Alinsett@Maung Thura says: ​ကောင်းလိုက်​တဲ့ professional Post
Zaw Thant says: .. ကျေးဇူးဗျ.. ကို အလင်းဆက်ရေ..
kai says: professional ကို ဗမာတွေ”ကြေးစား” လို့ပြန်တာ.. ကြေးစားမိန်းမနဲ့ရောပြီး.. အဆင့်နိမ့်သွားသမို့.. ကျုပ်တော့.. ပရိုဖက်ရှင်နယ်.. (အတို- ပရို)လို့ပဲမွေးစားရေးချင်သဗျ..။
၄နှစ်လောက်.. တောက်လျှောက်.. နိုင်ငံရေးအလုပ်နဲ့ လစာစားပြီး နေနိုင်သူပေါ့…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ဖတ်ဖူးတဲ့စာတစ်ခုမှာတော့ ထမင်းစားလက်မှတ်တဲ့။
Zaw Thant says: .. သူကြီး ဒက်ဖနေးရှင်း နဲ့ တွေ့တော့ ဒေါ်စုတောင် ပရိုမဟုတ်တော့ သလိုလိုပဲ.. :D
kai says: မာစတာဘွဲ့.. ဒါမှမဟုတ်.. ဒေါက်တာဘွဲ့တွေကိုတော့.. အဲဒီဘွဲ့ရဖို့.. ဘက်ခ်ျလာရှိထားရင်.. သီးစစ်စာတမ်းတင်.. လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းဝင်လုပ်ရတာတွေနဲ့ချိန်ဆပြီး.. ပရိုတန်း ပို့လိုက်ရကောင်းမလားပဲ..။
အဲလိုအသိအမှတ်ပြုမိကြောင်း.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: ကိုဇော်သန့် ရေ…။
ပရို တစ်ယောက်လုံး…၀ လုံးဝ မဟုတ်ပါကြောင်း။ ကိုဇော်သန့်ရေ။
Zaw Thant says: .. အသေးစိပ်အဖြစ်တွေကတော့ ရှေတန်းရောက်လူတွေဆီကပဲ ပြန်သိရတာပဲ.. ကိုယ်တိုင်တော့ အတိအကျမပြောတတ်ဘူးပေါ့.. ဒါပေ့မယ့် ကျွန်တော့်အထင်တော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံး ဒီပုံစံပဲ ဇာတ်သိမ်းမယ်ထင်တာဗျ.. ဇာတ်ညွှန်းက ဒီဇာတ်ညွှန်းကြီးပဲကိုး.. ဒီဇာတ်ညွှန်းဖြစ်အောင်လုပ်တာ ဟိုဖက်ကပါ ဒီဖက်ကပါတွေလည်း မငြင်းချင်တော့ဘူး.. .. ကျွန်တော့် ခံယူချက်ပြောရရင်တော့ အစိုးရ၊ စစ်တပ်၊ ရဲ စတာတွေကို တူးတူးခါးခါး မုန်းတဲ့လူမျိုးထဲတော့ မပါဘူးဗျ.. ဒါကြောင့် အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတာနဲ့ ဆန်ကျင်တဲ့ ကျောင်းသား အုပ်စုကို အော်တိုမက်တစ် ထောက်ခံတာမျိုးတော့ မရှိဘူး.. ဒါပေမယ့် ပညာရေးကိစ္စပြင်ဖို့လိုတာကတော့ ချွင်းချက်မရှိထောက်ခံတယ်.. (ဘာတွေပြင်သင့် မပြင်သင့် ကတော့ ပရိုတွေ ဆွေးနွေးကြပေါ့ဗျာ).. ဒါပေမယ့် ပညာရေးပြင်တဲ့ ကိစ္စက important ဖြစ်ပေမယ့် urgent လို့တော့ မထင်ဘူး.. အခုချက်ချင်းပြင်နိုင်ဦး အကျိုးရလာဒ်တွေက ရက်ပိုင်း လပိုင်း အတွင်း မြင်ရ မှာမှ မဟုတ်တာ.. အဲ့တော့ ကျောင်းသားတွေဖက်က လွှတ်တော်ကို အချိန်မပေးပဲ ရန်ကုန်တွင်း ဝင်ပါရစေ ဇွတ်လုပ်တာတော့ မကြိုက်ဘူး.. အဲ့တာကို တားဆီးတဲ့ အစိုးရအပိုင်းကို လက်ခံတယ်.. အကြမ်းပတမ်းဇွတ်တိုးလာရင် ခပ်ကြမ်းကြမ်းလူစုခွဲရတာ တားဆီးရတာကိုလည်း လက်ခံတယ်.. ဒါပေမယ့် တားဆီးတဲ့ law enforcer တွေ ပရိုမဖြစ်တာ ကိုအဓိကပြောချင်တာပါ.. ဒါလည်း ကိုယ်တိုင်အပါအဝင် နေရာတိုင်း ပရို မကျနိုင်ကြတဲ့ အတွက် အပြစ်လည်းမတင်နိုင်တော့ပါဘူး.. ထောက်ပြတဲ့ သဘောလောက်ပါပဲ.. .. ကျောင်းသားတွေဖက်မှာလည်း သဘောရိုးတွေကော မရိုးတွေကော ရောထွေးနေပါလိမ့်ဦးမယ်.. ပညာရေးဥပဒေ ပြင်ဖို့အတွက် စွန့်စားတာအားပေးပေမယ့် ရန်ကုန်ကို သပိတ်ချီဖို့ သက်သက် အထိခိုက်အနာကျင်ခံရတာ မတန်ဖူးလို့ထင်တယ်.. ဒီလိုအခြေအနေရောက်အောင်တွန်းပို့သူတွေကိုလည်း ဘဝင်မကျဘူး.. ကြိုးစားပမ်းစား ရန်ကုန်ရအောင်တိုးထွက်လာနိုင်လည်း ပညာရေးဥပဒေက ချက်ချင်းပြင်ရတာမှမဟုတ်တာ..
Mr. MarGa says: ပြောချင်တာနဲ့ ကွက်တိမို့ ဝင်ထောက်ခံပါတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: နိ ကို တူ အဖြစ်က အမွေဖြတ် စွန့်လွှတ်မယ်။
Mr. MarGa says: အရင်ဆုံးပြောတဲ့တစ်ယောက်ကို အရင်စွန့်လွှတ်ပါ Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ဒင်းကိုတော့ ပဲ ပလာတာဝယ်ခဲ့ဖို့ ပူစာလို့ မရတည်းက စွန့်လွှတ်တယ်
Mr. MarGa says: မန်းက ပဲပလာတာကို သီဟပူရအထိ မှာသပေါ့
ခင်ဇော် says: ၁. SpecializedKnowledge
ဦးကျောက်ခဲ says: အတ္တတွေအတွက် အနိုင်ကနေ အရှုံးဖြစ်တဲ့ပွဲလို့ မြင်ပါတယ်…
Zaw Thant says: .. နောက်ထပ် ရှုပ်နေတာက ဟိုဖက်ဒီဖက်မှာ လူအမျိုးမျိူးရောနေတယ်ထင်တယ်.. အစိုးရပိုင်းမှာ ပြင်ပေးချင်တဲ့သူရှိမယ်၊ မပြင်ပေးချင်တဲ့သူ ရှိမယ်၊ ညှိချင်တဲ့သူရှိမယ်၊ ကျောင်းသားဆိုရင်ကို ကြိုဖိထားချင်တဲ့သူမျိုးတွေလည်းရှိမယ်.. တားနေရတဲ့ ရဲတွေမှာလည်း ပြေပြေလည်လည်ဖြစ်စေချင်သူတွေရှိမယ်၊ သူတို့ကိုယ်တိုင် ပညာရေးပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်လို့ ယူဆသူတွေရှိမယ်၊ ဒီလောက်ဆူပူတဲ့ ကောင်တွေ ရိုက်ပစ်မှအေးမယ်လို့ ကြိမ်းနေမယ့်သူတွေရှိမယ်..
naywoon ni says: တစ်​ခုခက်​တာက “ကိုယ်​​တွေက နိုင်​ငံတစ်​ကာ စံနှုန်းနဲ့ တိုင်းတယ်​ ဒါ​ပေမဲ့ သူတို့​တွေ ( လက်​ရှိ အုပ်​ချုပ်​​နေသူ​တွေနဲ့ သူ့ဝန်​ထမ်း​တော်​​တော်​များများ ) က ​ခေါက်​ရိုးကျိုး​နေတဲ့ လက်​ရှိ ထုံးတမ်းစဉ်​လာ တို့ ယိုယွင်း​နေတဲ့ ယဉ်​​ကျေးမှုဆိုတာ​တွေနဲ့ တိုင်းတယ်​ ။ ဒီ​တော့ အမြင်​​တွေက ဘယ်​​တော့မှ တူမှာမဟုတ်​ ။ ကမ္ဘာ နဲ့ ရင်​​ဘောင်​တန်းဖို့​ဝေးလာ​ဝေး ​ဒေသတွင်း ( အာစီယံထဲမှာ​တောင်​ ) ၀င်​ဆန့်​လို့မရ ။
Zaw Thant says: .. စံ တွေကတော့ ကိုယ်လိုရာစွဲသုံးနေကြတာပါပဲဗျာ.. မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီသည် အနောက်တိုင်း ဒီမိုကရေစီ နဲ့ ထပ်တူချလို့ မရဘူးလို့ ဆိုတဲ့ အခါဆိုတယ်..ဒါပေမယ့်လည်း အနောက်တိုင်း ဒီမို နိုင်ငံတွေမှာလည်း ရဲ တွေ ဒီလိုပဲ ရိုက်ကြတာပဲ ဆိုပြီး ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ယှဉ်ပြောပြန်ရော..
မြစပဲရိုး says: မြန်မာပြည်ထဲ Profession ကို ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်ခေါ် သလားလို့။
Zaw Thant says: .. Professional စိတ်ဓာတ် နဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိတဲ့ သူတွေ ဆိုတာနဲ့တင် မရပ် စေချင်တာပါဗျာ.. ကိုယ်ကသူတို့ အလုပ်ရှင်ဆိုရင်တော့ တခါတည်းထုပ်ပစ်လို့ ရတာပေါ့.. အခုက ဒီလူ ဒီလူတွေ နောက် ၁၀ နှစ် အနှစ် ၂၀ လောက် ပါတ်သတ်နေရဦးမှာမို့လိုပါ.. Professional ဆန်ရေး အတွက် နိုင်ငံတကာ အကူအညီတွေပဲ လာလာ.. အစိုးရကပဲ ကြိုးစားကြိုးစား အားပေးချင်တဲ့ သဘောပါ..
Mike says: .Professional ပရို ဆိုတဲ့ အဆင့်တွေမှာ ၅. Self-Regulation ကလေ့ကျင့်ဖို့အခက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်မှတ်တယ်
.ကိုယ်တိုင်နဲ့နှိုင်းကြည့်မိတာပါ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 227
Zaw Thant says: .. ကျွန်တော့် မှတ်မိသလောက် နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ ဇာတ်လိုက်မင်းသား ရဲ အရာရှိက သူ အသေအကြေမုန်းတဲ့ လူဆိုးကို နောက်ဆုံးဖမ်းမိတဲ့ အချိန်ကျရင် သတ်မိမလိုဖြစ်ရင်းနဲ့မှ စိတ်ထိန်းပြီး အရှင်ဖမ်းခဲ့တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းမျိုးတွေကြည့်ရတာ မကြာခဏပဲ.. လူတိုင်းအတွက် ခက်တယ်လို့ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်..
မြစပဲရိုး says: အရေးကြီး တာ ကျန်သေးတယ်။ သိလား မောင်ဇော်။
Zaw Thant says: .. မူရင်းရေးထားတဲ့ အထဲမှာတော့ တွေ့လိုက်တယ်ဗျ.. Ethic တို့ Value တို့ .. Honesty and Integrity ခေါင်းစဉ်ထဲ ဝင်သွားတယ်မှတ်တယ်.. လောလောဆယ်တော့ Ethic ဆိုတာ စာအုပ်ထဲရှိမှန်းသိရင်ကို မဆိုးပါဘူး ပြောရမယ့် အခြေအနေ..
မြစပဲရိုး says: ပရို ဒိုင်လူကြီး တဲ့ ဟေ့။ ဒီမှာကြည့်ကြ။ lol:-))))))))))))))))))
padonmar says: င်္FB က တွေ့တာလေး မလာတာပါ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ခါတော်မှီ ပို့်စ်လေးပါနော်။ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ကိုဇော်သန့် ပထမဆုံး ၀င်တုန်းက ဆီးရီးယား အကြောင်း ရေးဖူးသေးတယ် မဟုတ်လား။ အဲဒီ လင့်ခ်လေး ပေးပါလားဟင်။ ဆီးရီးယား ကိစ္စ အမ ချာလပတ်လည်နေလို့။
kai says: ဘယ်နှယ်.. ဆီသီးသွားရောင်းတဲ့အရေး ဖြစ်ပြန်ပြီလဲ.. ပြုံးမမရေ…
padonmar says: FB ကစာလေး လာစုပေးတာပါ။
kai says: ပရိုဆိုတာကြီးအပေါ်.. ဘာသာရေးလွှမ်းမိုးချက်ကတော့.. မြန်မာပြည်က ဘာမဂ္ဂဇင်း.. ဂျာနယ်.. စာအုပ်ကောက်လှန်လှန်… ဘာသာရေးနဲ့ကင်းကင်းရေးတာမတွေ့ရတတ်…။
ကျုပ်မိခင်များဆို.. ဇွဲကောင်းတာ.. ဘုန်းကြီးကဆောက်လိုက်.. ပြိုလိုက်.. ငွေလှူလိုက်.. ပြန်ဆောက်လိုက်.. အဲလို..။ အနိစ္စ… အနိစ္စ…။ မှတ်ချက်။ ။ ဇီဇီမပြောစေ…မမြင်စေရ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: မီဒီယာ ဘုန်းကြီး ၊ ကင်မရာ ကိုင်ပြီး သတင်းယူ သူ သတင်းထောက် ဘုန်းကြီး ကျန်ပါသေးတယ် သူကြီး မင်းရှင့်။ lol:-)))))
ခင်ဇော် says: ပြောတော့ပါဘူးးဗျာ..
kai says: Post by မြန်မာပြည်တွင်လုပ်သည်.